ပြည်တွင်းတွင် ရောင်းချရန် မီဆူဘီရှီပါကျဲရိုးများ | မီဆူဘီရှီပါကျဲရိုး ကားဈေးများ Carmudi Myanmar [Burma]
Red Mitsubishi Pajero Sport (Turbo) 2017 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: ...
ဒီMitsubishi Pajero မင်္ဂလာပါ Admin&All friend +++ Mitsubishi Pajero+++ +Model -1996 +Engnie -2800CC E ပန့်လူရုပ်/4Wheel +Gread - V26 +Gear -Auto +Colour -White +Nunber -4C-3053(YGN) +Ki...
Black Mitsubishi Pajero 2001 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြ...
Pearl White Mitsubishi Pajero 2000 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်...
Pearl White Mitsubishi Pajero 1999 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်...
Silver Mitsubishi Pajero 1999 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလြုံ...
Silver Mitsubishi Pajero 1996 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလြုံ...
Pearl White Mitsubishi Pajero 1999 ??????? ???????????????? ????????????????????????????? ???????????????? ????????? A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ??????...
Red Mitsubishi Pajero Sport (turbo) 2017 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,Original TV,Navigation System,Power Locks,Power St...
Silver Mitsubishi Pajero 2003 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလြုံ...
Mitsubshi Pajero 1999
Silver Mitsubshi Pajero 1999 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြ...
Black Mitsubishi Pajero 1996 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြ...
Blue Mitsubishi Pajero 2000 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြံ...
Dark Green Mitsubishi Pajero 1999 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Pas...
Silver Mitsubishi Pajero 1997 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: ...
Silver Mitsubishi Pajero 2001 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Passeng...
မြို့တွင်း မြို့ပြင် တွေမှာ အသုံးများတဲ့ မစ်ဆူဘီရှီ ပါကျဲရိုးများ
မစ်ဆူဘီရှီ တံဆိပ်ထဲက ပါကျဲရိုး ကား များဟာ ယမန်နေ့ တစ်ချိန် တစ်ခါက နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ SUV ကားများ ဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့ဈေးကွက်မှာတော့ မော်ဒယ် အနိမ့်တွေ ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် ၀ယ်ယူ စီးနိင်မူမှာ အားနည်းသွားပါတယ်။ ဌင်းရဲ့ အစ ခေတ်သစ် မော်ဒယ်တွေ ဖြစ်တဲ့ ဈေးကွက် ထဲမှာ နာမည်ရနေတဲ့ မစ်ဆူဘီရှီ အာဗီအာ၊ တို့လို့ နောက်ဆုံးပေါ်ကားတွေ ၀င်ရောက်လာပါတယ်။ တိုယိုတာ လပ်ဆပ်၊ လန်ခရုဇာတို့လို့ ကားတွေကိုသာ အများဆုံး အသုံးပြုနေတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာ ရှိနေတဲ့ တစ်ပတ်ရစ်ကားများမှာ မော်ဒယ်ဟောင်းကားများ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဈေးနှုန်းကလည်း အရင်လောက် မမြင့်တော့တာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပါကျဲရိုး စီးရီးကို ယနေ့ထိ ထုတ်ပေမဲ့ မော်ဒယ် အခွန်မြင့်ပြီး ကားဈေးမှာလည်း အဆမတန် မြင့်မားသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကားပုံစံလည်း အရင်ကထက် အတော်အတန်ကို ပြောင်းလဲသွားပါတယ်. ပြောရရင် မှတ်မမိနိင်လောက်အောင်ပါပဲ။ နောက်ပိုင်းထွက် မော်ဒယ်တွေက မစ်ဆူဘီရှီ အောက်တလန်ဒါနဲ့ သွားဆင်ပါတယ်။ ထိုကားရဲ့ ၂၀၁၃ ခုနှစ် အသစ် ဘရန်နယူးဈေးကတော့ ဒေါ်လာ ၅သောင်း ကျော်လောက် သွားကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတောင် အခွန်နဲ့ အခြား ကုန်သွယ် စရိတ်တွေ မပါသေးပါဘူး။
ဒါကြောင့် ပြည်တွင်းမှာတော့ မစ်ဆူဘီရှီ ပါကျဲရိုး စီးမယ်ဆိုရင် တစ်ပတ်ရစ် ဈေးသင့်လျော်တဲ့ မော်ဒယ် နိမ့်ကားတွေကို စီးကြပါတယ်။ ပုံမှန် အရင် ပြီးခဲ့တဲ့အခါက ပြည်တွင်း အခွန်မပြောင်းခင်တုန်းကဆိုရင် ၁၉၉၆၊ ၁၉၉၇၊ ၁၉၉၈ မော်ဒယ်များကို အများဆုံးသွင်းကြပါတယ်။ အခု တစ်ခါမှာတော့ ၂၀၀၀ ခုနှစ်ကနေ အိမ်စီးကားတွေကို တင်သွင်းခွင့်ကို သတ်မှတ်လိုက်တဲ့ အတွက် ၂၀၀၀ ခုနှစ်နဲ့ ၂၀၀၀ အောက် ပတ်ဝန်းကျင်ကားတွေ အေ၇ာင်းအ၀ယ် ရှိလာပါတယ်။ ပြည်တွင်း အချင်းချင်း ပြန်လည်ရောင်းချ တဲ့ ဈေးကွက်မှာတော့ ၂၀၀၀ ခုနှစ်အောက်ကားများကို တော်တော်များများ တွေ့ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၉၆ ကနေ ၂၀၀၁ လောက်ထိကို အများဆုံး တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မစ်ဆူဘီရှီ ပါကျဲရိုးကားတွေဟာ အင်ဂျင်ကြီးတဲ့အတွက် ထိုအတွက် အခွန်ကလည်း သတ်သတ် ကို ကြီးနေပါတယ်။ ထိုအတွက် မော်ဒယ် အမြင့်တွေကို သိပ်မသွင်းကြပါဘူး။
ဘီးအမြင့် SUV ယာဉ်အမျိုးအစားပါပဲ။ တကယ်တော့ မစ်ဆူဘီရှီ ပါကျဲရိုး ဆိုတာ တောင်ဖက်အကျဆုံးဖြစ်တဲ့ အာဂျင်တီးနားနိင်ငံရှိ ဒေသတစ်ခုမှာ ရှိတဲ့ စကားရပ် တစ်ခုကနေ ပေါ်ပေါက်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ စပိန်မှာတော့ မစ်ဆူဘီရှီ မွန်တဲ့ရိုလို့ အသိများပါတယ်။ အမေရိကနဲ့ အိန္ဒိယမှာလည်း ဒီနာမည်ပဲ သိကြပါတယ်။ အရင်က ၁၉၈၂ လောက်က ထုတ်တဲ့ မျိုးဆက်မှာ အသေးစား ကိုယ်ထည် ဆိုဒ်နဲ့သာ ထုတ်ခဲ့တာပါ။ ၁၉၉၉ နောက်ပိုင်းမှတော့ ကိုယ်ထည်အပြည့်ကားတွေကို ထုတ်ပြီး ရောင်းချခဲ့ပါတယ်။ မျိုးဆက် လေးဆက်ရှိပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာတော့ ၁၉၉၉ ကနေ ၂၀၀၆ အထိ ကို ထုတ်တဲ့ တတိယ မျိုးဆက်ကို ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အတွေ့ရများတဲ့ ၁၉၉၉ ကနေ ၂၀၀၆ ကားတွေမှာ ၂၅၀၀ စီစီ ကနေ ၃.၈ စီစီထိကို ရှိပါတယ်။ အသုံးများတဲ့ အင်ဂျင်တွေတော့ ၃၀၀၀ စီစီ၊ ၂၈၀၀ စီစီ၊ ၃၂၀၀ စီစီနဲ့ ၃၅၀၀ စီစီ တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇယ်၊ ဓာတ်ဆီ အမျိုးအစား ကွဲတဲ့ အင်ဂျင်တွေ လာပါတယ်။ အော်တို အသုံးများပြီး ဂီယာ ၅ ချက် မန်နျူးယယ်ပါလာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာတော့ ဂျပန်မှာ ၁၉၉၉ ခုနှစ်ကားတွေကို စရခဲ့တဲ့ အနေနဲ့ တစ်ပတ်ရစ်ကားတွေအဖြစ် ထိုကားတွေကို ပြည်တွင်း ဈေးကွက်မှာ ဂျပန် လေလံ ဆိုဒ်တွေကနေ ပြန်ပြီး ၀င်ရောက် လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖိလစ်ပိုင်မှာဆိုလျှင် ထို တတိယ မျိုးဆက်ထဲကမှ ၂၀၀၃ ခုနှစ်ကို စပြီး ရရှိပါတယ်။ အတွင်း အစိတ်အပိုင်းတွေကတော့ ပါရှိတဲ့ ကားမော်ဒယ် အလိုက် ကွဲမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပါကျဲရိုးထဲမှာမှ ပါကျဲရိုး အိတ်ခ်ျစိ ပရီမီယံ အယ်ဒီရှင်း၊ ပါကျဲရိုး လောင်း အိတ်ခ်ျစိ၊ ၀ိုင်တ် စူပါ အိခ်ျစ်စိ ဆိုပြီး အမျိုးအစား အမျိုးမျိုး ရှိပါတယ်။ ဈေးတွေကလည်း လေလံမှာဆို ဂရိတ်အပေါက်၊ မော်ဒယ် အပေါ်မူတည်ပြီး ကွဲမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မစ်ဆူဘီရှီ ပါကျဲရိုးတွေမှာ မျိုး ဆက် (၄) ဆက်လောက်ရှိရမှာ ပထမဆုံးကနေ နောက်ဆုံး အထိကတော့ အသွင်တွေက တစ်ခုအပေါ်မှာပဲ အခြေခံထားပါတယ်။ ဒုတိယမျိုးဆက် ရုပ်ဖြစ်တဲ့ ၁၉၉၉ လောက်ကို စစချင်း ပြည်တွင်းမှာ ကားတွေ တင်သွင်းခွင့် စတင်ရရှိတုန်းက အသွင်းများပါတယ်။ နောက်ပိုင်းကားတွေကတော့ မစ်ဆူဘီရှီရဲ့ လိုင်းတစ်ခုထဲမှာပဲ သွားပြီး အက်ယူဗီတို့ရဲ့ ပေါင်းစပ်မှု နဲ့အတူ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ အမြင့်ကား လန်ခရုဇာတွေလို့ပဲ တွေရမှာ ဖြစ်ပြီး ဟိုင်းလတ် ဆပ်ကားတွေနဲ့လည်း များစွာ နီးစပ်ပါတယ်။ အနောက်ဖက်မှာ ဘီးတွေပါ ပါဝင်ပြီး အတွင်းခန်းက ဒတ်ရ်ှဘုတ်နဲ့ ဂီယာ အုံတွေက အစ လေးထောင့်ဆန်ဆန်နဲ့ ကြံခိုင်မှု အသွင်ကို ဆောင်နေပါတယ်။ လူ(၅) ယောက်စီးနင်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး ကားအတွင်းမှာ သင့်တင့်တဲ့ ကျယ်ဝန်းမှု တစ်ခုကို ရယူနိုင်ပါမယ်။
၀ယ်ယူ ရတဲ့ ထင်ရှားမှုများ
မစ်ဆူဘီရှီ ပါကျဲရိုးကားတွေဟာ နောက်ပိုင်း တိုယိုတာ ဟိုက်လပ် ဆပ်တို့ တိုယိုတာ ဟာရီယာတို့ မပေါ်ခင်က အများကြားမှာ အစီးများခဲ့တဲ့ ကားတစ်စီး ဖြစ်ပါတယ်။ ကား ပုံစံ ထင်ရှားခြင်း ၊ သက်တောင့် သက်သာ ရှိခြင်း ၊ ဒီဇိုင်း ပုံစံ တွေကြောင့် လူကြိုက်များပါတယ်။ တစ်ချို့မားကတ်တွေမှာ ဒီဇယ် အင်ဂျင်ကိုလည်း ရရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
တစ်ပတ်ရစ် ဈေးကွက် ပေါက်ဈေး
ဒီဇယ်ကားတွေဟာ ပြည်တွင်းရဲ့ ဈေးကွက် အကြိုက်ဖြစ်သည့်နဲ့အညီ ဈေးနှုန်း ကွာခြားမူမှာ စကားပြောသွားပါတယ်။ အနည်းဆုံး ၅ သိန်းလောက်ကို ကွာပါတယ်။ ဒီဇယ်က ဈေးပိုမြင့်တာဖြစ်ပါတယ်။ အကြမ်းအားဖျင်းတော့ တစ်ပတ် ရစ် ကားဈေးနှုန်းများမှာ ကျပ် သိန်း ၁၃၀ ကျော်အနည်းဆုံးရှိကာ သိန်း ၃၀၀ လောက်ထိရှိပါတယ်။ ဒီဇယ်၊ ဓာတ်ဆီ ရွေးနိင်သကဲ့သို့ မန်နျူးယယ်၊ အော်တိုလည်း ရွေးနိင်ပါမယ်။
မစ်ဆူဘီရှီ ပါကျဲရိုးတွေဟာ ၂၀၀၆ နောက်ပိုင်းထိ မျိုးဆက် (၄) ဆက်မြောက်မှာ ဆက်လက် ထွက်ရှိနေပေမဲ့လို့ နောက်ပိုင်းကားတွေက ဒီဇိုင်းတွေ ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ မစ်ဆူဘီရှီ ပါကျဲရိုး အစား ဌင်းနဲ့ အင်ဂျင်လည်း သေးပြီး ပိုပြီးလည်း ဒီဇိုင်းလှပတဲ့။။ တိုယိုတာ ဟာရီယာ၊ တိုယိုတာအာဗီအာနဲ့ အခြား အမြင့်ပိုင်းကားတွေကို လူပိုကြည့်လာကြပါတယ်။ သို့ပေမဲ့ မီဆူဘီရှီ ပါကျဲရိုးတွေဟာ ပြည်တွင်းမှာ အကြိုက် တစ်မျိုးဆီနဲ့အတူ ရှိနေတာကို တွေ့ကြရပါတယ်။